Uyazisola ngokushiya iKaizer Chiefs - Ilanga News
Home Izindaba Uyazisola ngokushiya iKaizer Chiefs
Uyazisola ngokushiya iKaizer Chiefs
Ujinyiswa nesikimu esincane kwiDowns
UGEORGE Lebese odume kwiKaizer Chiefs okuvela ezithi akasekho ezinhlelweni zeMamelodi Sundowns ebi-mbolekise kwiSuperSport United ngesizini edlule. ISITHOMBE NGABE: BACKPAGEPIX
UJINYISWA nesikimu senku-lisa umdlali weMamelodi Sundowns okuvela ukuthi uzicelele ukuba le kilabhu imkhulule.
ILANGA LangeSonto lihoshe ngemithombo yalo engaphakathi kwiDowns ukuthi uGeorge Lebese odlala esiswini kule kilabhu ushovelwe esikimini esincane sale kilabhu ukuba ajime naso emuva kokuba ecele le kilabhu ukuba imkhulule.
ULebese ngesizini eyedlule ubebolekiswe yiDowns kwiSuperSport United.
Ufike kule kilabhu wadlaliswa, kokunye abuye angadlali.
Uzwakalise ukujabula uma engasekho kwiDowns ethi uzizwa ezelwe kabusha.
Nokho emuva kokuba kuphele isizini iSuperSport inqume ukumphindisa emuva.
Ufike kwiDowns wajima kancane nesikimu esikhulu wabe esetshelwa ukuba makayojima nesikimu esi-ncane sale kilabhu.
Akugcinanga lapho njengoba engazange abe yingxenye yeqembu elisekhempini eMbombela.
Kuthiwa nomzungezo weDowns wasemazweni ase-Afrika ngeke abe khona.
Umthombo waleli phephandaba uthe:“ULebese uyazisola ngokushiya iKaizer Chiefs.
“Ubezitshela ukuthi impilo izoba mnandi kwiDowns ngoba nakhu engowaseMamelodi kanti akuzukuba njalo.”Selokhu efike kwiSundowns akakaze akuthole ukujabula.
“Njengamanje ujima nesikimu esi-ncane, uyabona nje ukuthi uhlukumezekile.
“Akhona amakilabhu amfunayo uma esho, kungenzeka kuphele leli sonto esehambile kwiDowns,” kusho lo mthombo.
UPitso “Jingles” Mosimane ukuqinisekisile ukuthi uLebese akasiyona ingxenye yeqembu njengoba lenza amalungiselelo okuqala kwesizini entsha.
“Engingakusho wukuthi uLebese ufuna ukuhamba ekilabhini ngoba uyabona ukuthi abantu abanga nabo basefomini ngeke aze alithole ithuba lokudlala.
“Ngeke simvimbe uma kukhona ikilabhu emfunayo, sizomudedela.
“Akasiyona ingxenye yekilabhu njengoba senza amalungiselelo okuqala kwesizini,” kusho uMosimane.
Previous articleIngane itholakale kwi-trunk seyonakele
Next articleIChiefs ifuna u-R30 million ngoBilliat